Saliida iyo Gaaska-Saliida iyo Gaaska-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan waalka waa sumadeena)
Hoyga>Codsiyada>Oil and Gas
Fiilooyinka dhuumaha ayaa loo qaabeeyey loona soo saaray si waafaqsan API6D & ISO14313 waxaana loo isticmaali karaa khadadka gudbinta ee loogu talagalay ASME B31.3, ASME B31.4, ASME B31.8 ama heerar u dhigma.
Titan waxay soo saartaa xariiqyo fara badan iyada oo loo marayo marinnada go'doominta marin biyoodka ee yareynaya hoos u dhaca cadaadiska socodka, oo ay ku jiraan furitaannada buuxa ee furayaasha aan soo laabanayn sida kubbadda korantada lagu xidho, iyada oo loo marayo marinka marin biyoodka, iyo jeegagga buuxa ee jeegga lagu furo.
Fuuq-bixiyeyaasha go'doominta Titan waxaa loo qaabeyn karaa astaamo gooni-gooniya oo kala duwan oo ay ku jiraan laba-geesood & dhiig-bax iyo / ama laba-soocid & dhiig bax.
Kursiga Elastomeric & thermoplastic (jilicsan) ayaa sida caadiga ah lagu dabaqaa adeegyo nadiif ah ama qaboojiyeyaasha aasan ee jiifka ah, halka birta iyo qaabeynta qaababka birta loo bixin karo go'doominta halista ah sida furitaanka & helitaanka tas-hiilaadka, saliidda ceyriin, iyo nabaad-guurka / adeegyada wasakhda ah.
Fiilooyinka Titan waxaa lagu dhaqi karaa hawo wadata, gaas toos ah, gaas ka saraysa saliida ama unugyada haydarooliga korantada oo awood u leh inay soo bandhigaan howlaha biririfta marka la cayimay.